ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း သိသင့်တဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်
6 Aug 2017 . 5:54 AM
ဗုဒ္ဓဆိုတာ တရားအားလုံးကို ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ သိမြင်တဲ့သူဖြစ်ပြီး ဘာသာဆိုတာက ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားတော်လို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာက ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားတော်တွေကို လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့သူလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမယ့် ဘိုးတော်ကို ဆည်းကပ်လိုက်၊ နတ်ကို ကိုးကွယ်လိုက်၊ အကြားအမြင်ဆရာကို ပ သလိုက်ဆိုရင် မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာ ငါးပါးသီလနဲ့ သရဏဂုဏ်သုံးပါးကို ခါးဝတ်ပုဆိုးလို ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ စွဲမှတ်ထားသူကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ အခြေခံသိသင့်သိထိုက်တဲ့ ဘာသာရေးဗဟုသုတတွေကို ကျမ်းဂန်ပေါင်းစုံက ထုတ်နှုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ ဘုရားဆိုတာ ဘာလဲ။
ဘုရားဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ ပူဇာနဲ့ အရဟ ပါဠိနှစ်လုံး ပေါင်းစပ်ပြီး ပုဂံခေတ်ပညာရှင်တွေ တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပူဇာ (အမြတ်တနိုး ရိုသေခြင်း) နဲ့ အရဟ (လူနတ်ဗြဟ္မာသတ္တဝါတို့ရဲ့ ပူဇော်အထူးကို ခံယူတော်မူထိုက်ခြင်း) ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေ ပြည့်စုံနေပြီး ပူဇော်ထိုက်တဲ့အတွက် ဗုဒ္ဓကို ဘုရားလို့ ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ “ပူဇာအရဟ” ကနေ “ပုရှာ” ၊ “ပုရှာ” ကနေ “ဖုရှာ” ၊ “ဖုရှာ” ကနေ “ဖုရား” ၊ “ဖုရား” ကနေ “ဘုရား” ဆိုပြီး စာလုံးပေါင်းအမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဝေါဟာရပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓနဲ့ ဘုရား ဘာကွာသလဲဆိုရင် ဗုဒ္ဓဆိုတာ သစ္စာလေးပါး တရားတော်ကို ပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားကတော့ ပူဇော်ထိုက်တဲ့သူလို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အတွက် တခြားဘာသာတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အများဆိုင်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ တရားဆိုတာ ဘာလဲ။
ဘုရားရှင် လေးဆယ့်ငါးဝါအတွင်း ဟောကြားခဲ့တဲ့ ဒေသနာတော်တွေဟာ ဆင်းရဲချမ်းသာ ဘက်မလိုက်ဘဲ မှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်တတ်လို့ တရားလို့ ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ တရားတော်ကို သုံးပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး ပိဋကတ်သုံးပုံလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ပိဋကဆိုတာ တောင်း၊ ခြင်းတောင်းလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ တရားတော်တွေကို တူရာတူရာပေါင်းစုပြီး တောင်းထဲကို ထည့်လိုက်ရင် သုတ္တန်တရားတော်က တစ်တောင်း၊ ဝိနည်းတရားတော်က တစ်တောင်းနဲ့ အဘိဓမ္မာတရားတော်က တစ်တောင်းဖြစ်လာပါတယ်။ သုတ္တန်တရားတော်ဆိုတာ အချိန်ကာလ၊ နေရာဒေသနဲ့ အခြေအနေကို နှိုင်းဆပြီး ဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဝိနည်းတရားတော်ဆိုတာက ရဟန်းတော်တွေအတွက် ဘုရားရှင် ပညတ်ထားတဲ့ တရားတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဘိဓမ္မာတရားတော်ဆိုတာ သုတ်၊ ဝိနည်းတွေထက် မြင့်ပြီး အချိန်ကာလနဲ့ နေရာဒေသကို မကြည့်တဲ့ တရားတော်ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ သံဃာဆိုတာ ဘာလဲ။
အပယ်လေးပါးကို ကျရောက်စေတတ်တဲ့ ကိလေသာတရားတွေကို ပယ်သတ်နိုင်ပြီး ဘုရားအဆုံးအမတွေကို လိုက်နာကာ အကျင့်သီလတူညီကြတဲ့သူတွေကို သံဃာလို့ ခေါ်ပါတယ်။ သံဃာကို အရိယာသံဃာ (ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေ ပယ်သတ်ပြီးသောသူ) နဲ့ သမ္မုတိသံဃာ (နိဗ္ဗာန်မဂ်ဖိုလ်ရအောင် ကြိုးစားနေတဲ့သူ) ဆိုပြီး ခွဲခြားထားပါတယ်။ ရဟန်းဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကတော့ “အရဟန္တ (ကိလေသာမရှိတဲ့သူ)” ကနေ ဆင်းသက်လာတာပါ။ ရှေ့စကားလုံး “အ” နဲ့ နောက်စကားလုံး “တ” ပြုတ်ပြီး အချိန်ကာလကြာလာတာနဲ့ “ရဟန်း” ဆိုပြီး ဖြစ်လာတာပါ။ ရဟန်းအဖြစ်ကို ခံယူတဲ့အခါ အင်္ဂါငါးပါး ပြည့်စုံရပါတယ်။
(၁) ဝတ္ထု (ရဟန်းလောင်းရှိခြင်း)
(၂) ပရိသတ် (အနည်းဆုံး ရဟန်းငါးပါးရှိခြင်း)
(၃) ဥတ် (ကမ္မဝါစာ အချီးစကား)
(၄) ကမ္မဝါ (ကံဆောင်စာ) နဲ့
(၅) သိမ် (ရဟန်းခံရာအရပ်)
အဲဒီအင်္ဂါငါးပါးကိုတော့ ပါဠိလို “ပဉ္စင်္ဂ” လို့ ခေါ်ပါတယ်။ “ပဉ္စင်္ဂ” ကို မြန်မာမှုပြုလိုက်တဲ့အခါ “ပဉ္စင်း” ဆိုပြီး ဖြစ်လာပါတယ်။ လေးစားသမှုနဲ့ “ဦး” တပ်လိုက်တဲ့အခါ “ဦးပဉ္စင်း” ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ သတ္တဝါတွေအတွက် ရခဲခြင်းတရားငါးပါး (ဒုလ္လဘတရားငါးပါး) ရှိပါတယ်။
(၁) ဘုရားအဖြစ်ကို ရခဲခြင်း
(၂) လူ့အဖြစ်ကို ရခဲခြင်း
(၃) သဒ္ဓါတရားပြည့်စုံတဲ့အဖြစ်ကို ရခဲခြင်း
(၄) ရဟန်းအဖြစ်ကို ရခဲခြင်း
(၅) သူတော်ကောင်းတရား နာရခဲခြင်း
လေးအသင်္ချေနဲ့ကမ္ဘာတစ်သန်း ပါရမီဖြည့်ကျင့်ခဲ့ရတဲ့ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် မြင့်မြတ်တဲ့ ရဟန်းအဖြစ်ကို ကိုးကြိမ်ပဲရဖူးတဲ့အတွက် ရဟန်းဘဝကို ရောက်ကြတဲ့သူတွေဟာ ဘုန်းကံကြီးမားတဲ့အတွက် ရဟန်းတော်တွေကို “ဘုန်းကြီး” လို့ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်ဘုရင်ရဲ့ သား၊ သမီးတွေကို “သားတော်” “သမီးတော်” ဆိုပြီး သုံးနှုန်းကြသလို ရှင်ဘုရင် ကိုးကွယ်တဲ့ ရဟန်းတော်တွေကိုလည်း “မင်းဆရာတော်” ဆိုပြီး ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ ဘုရင်ခေတ်မရှိတော့တဲ့အခါ “မင်း” ပြုတ်ပြီး “ဆရာတော်” ဝေါဟာရကျန်ရစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ခြုံငုံသုံးသပ်ရရင်တော့ သက်တော်၊ ဝါတော်နုနယ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမရှိသေးတဲ့ သာသနာ့ဝန်ထမ်းတွေကို “ဦးပဉ္စင်း” “ရဟန်း” လို့ သုံးနှုန်းကြပြီး ဝါတော်ကြီးမြင့်တဲ့ သာသနာ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတော့ “ဆရာတော်” “ဘုန်းကြီး” လို့ သုံးနှုန်းကြပါတယ်။
ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတော်တွေကို “ရတနာမြတ်သုံးပါး” လို့ ခေါ်ဆိုပါတယ်။ ရတနာဆိုတာ “နှစ်သက်ကြည်နူးမှုကို ဖြစ်စေတဲ့အရာ” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ ပါဠိစကားဖြစ်ပါတယ်။ စိန်ရွှေ၊ ပတ္တမြားကိုလည်း ရတနာ၊ သားသမီးတွေကိုလည်း သားရတနာ သမီးရတနာဆိုပြီး ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ ရတနာအားလုံးထဲမှာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာသုံးပါးဟာ အမြတ်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက် တခြားရတနာတွေနဲ့ မတူအောင် “ရတနာမြတ်သုံးပါး” လို့ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ရှိခိုးခြင်းနှင့် ကန်တော့ခြင်း။
အိပ်ရာဝင်ခါနီးမှာ ဘုရားရှိခိုးမယ်၊ ဘုရားကန်တော့မယ်ဆိုပြီး ပြောကြတယ်။ ရှိခိုးမယ်နဲ့ ကန်တော့မယ်ဆိုပြီး ဝေါဟာရတွေ ပြောင်းလဲသုံးနှုန်းကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာကန်တော့ပွဲလို့သာရှိပြီး ဆရာရှိခိုးပွဲဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ကဲ . . ဒါဆို ရှိခိုးခြင်းနဲ့ ကန်တော့ခြင်း ဘာကွာသလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
ကန်တော့ရတဲ့အကြောင်းက ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာစတဲ့ ရတနာမြတ်သုံးပါးနဲ့ တခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်အပေါ်မှာ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံ တစ်ပါးပါးနဲ့ ကျူးလွန်မှုရှိတယ်။ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကို ပြေပျောက်ချင်တဲ့အတွက် ကန်တော့တာဖြစ်ပါတယ်။ အပြစ်ရှိထားလို့ ကန်တော့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကန်တော့လိုက်ရတဲ့အတွက် ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အပြစ်တွေ ပြေပျောက်သွားပါတယ်။ (မှတ်ချက်။ ။ ပဉ္စာနန္တိယကံငါးပါး မပါ)
ရှိခိုးရတဲ့အကြောင်းက ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာစတဲ့ ရတနာမြတ်သုံးပါးနဲ့ တခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်အပေါ်မှာ အပြစ်ကျူးလွန်ထားခြင်း မရှိပါဘူး။ ရတနာမြတ်သုံးပါးနဲ့ မိဘဆရာတွေရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ကြည်ညိုလေးစားတဲ့အတွက်ကြောင့် ရှိခိုးတာဖြစ်ပါတယ်။ ရှိခိုးလိုက်ရတဲ့အတွက် အသက်ရှည်ခြင်း၊ အဆင်းလှခြင်း၊ ဘုန်တန်ခိုးကြီးခြင်း၊ ဥာဏ်ပညာကြီးခြင်း စတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရှိခိုးတာ ကုသိုလ်ရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ . . . ဒါတွေကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အခြေခံသိထိုက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေဖြစ်ပါတယ်။ နောက်များမှာလည်း ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်အကြောင်းအရာတွေကို ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ သိရအောင်လည်း ဝေငှပေးပါဦးလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကိုးကား ။ ။ မိရိုးဖလာလွန် ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ သုခမှတ်စု၊ ဇိနတ္ထပကာသနီကျမ်း။
ဗုဒ်ဓဆိုတာ တရားအားလုံးကို ကိုယျပိုငျဉာဏျနဲ့ သိမွငျတဲ့သူဖွဈပွီး ဘာသာဆိုတာက ဗုဒ်ဓဟောကွားခဲ့တဲ့ တရားတျောလို့ ဆိုလိုတာဖွဈပါတယျ။ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျဆိုတာက ဗုဒ်ဓဟောကွားခဲ့တဲ့ တရားတျောတှကေို လိုကျနာကငျြ့သုံးတဲ့သူလို့ အဓိပ်ပာယျရပါတယျ။ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျဖွဈပမေယျ့ ဘိုးတျောကို ဆညျးကပျလိုကျ၊ နတျကို ကိုးကှယျလိုကျ၊ အကွားအမွငျဆရာကို ပ သလိုကျဆိုရငျ မဟုတျသေးပါဘူး။ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျဆိုတာ ငါးပါးသီလနဲ့ သရဏဂုဏျသုံးပါးကို ခါးဝတျပုဆိုးလို ခိုငျခိုငျမွဲမွဲ စှဲမှတျထားသူကို ဆိုလိုတာဖွဈပါတယျ။ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတှအေနနေဲ့ အခွခေံသိသငျ့သိထိုကျတဲ့ ဘာသာရေးဗဟုသုတတှကေို ကမျြးဂနျပေါငျးစုံက ထုတျနှုတျဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁။ ဘုရားဆိုတာ ဘာလဲ။
ဘုရားဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ ပူဇာနဲ့ အရဟ ပါဠိနှဈလုံး ပေါငျးစပျပွီး ပုဂံခတျေပညာရှငျတှေ တီထှငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ပူဇာ (အမွတျတနိုး ရိုသခွေငျး) နဲ့ အရဟ (လူနတျဗွဟ်မာသတ်တဝါတို့ရဲ့ ပူဇျောအထူးကို ခံယူတျောမူထိုကျခွငျး) ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျတှေ ပွညျ့စုံနပွေီး ပူဇျောထိုကျတဲ့အတှကျ ဗုဒ်ဓကို ဘုရားလို့ ကငျပှနျးတပျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ “ပူဇာအရဟ” ကနေ “ပုရှာ” ၊ “ပုရှာ” ကနေ “ဖုရှာ” ၊ “ဖုရှာ” ကနေ “ဖုရား” ၊ “ဖုရား” ကနေ “ဘုရား” ဆိုပွီး စာလုံးပေါငျးအမြိုးမြိုး ပွောငျးလဲလာတဲ့ ဝေါဟာရပဲဖွဈပါတယျ။ ဗုဒ်ဓနဲ့ ဘုရား ဘာကှာသလဲဆိုရငျ ဗုဒ်ဓဆိုတာ သစ်စာလေးပါး တရားတျောကို ပိုငျးခွားသိမွငျနိုငျတဲ့သူဖွဈပွီး ကိုယျပိုငျနာမညျဖွဈပါတယျ။ ဘုရားကတော့ ပူဇျောထိုကျတဲ့သူလို့ အဓိပ်ပာယျရတဲ့အတှကျ တခွားဘာသာတှနေဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ အမြားဆိုငျနာမညျဖွဈပါတယျ။
၂။ တရားဆိုတာ ဘာလဲ။
ဘုရားရှငျ လေးဆယျ့ငါးဝါအတှငျး ဟောကွားခဲ့တဲ့ ဒသေနာတျောတှဟော ဆငျးရဲခမျြးသာ ဘကျမလိုကျဘဲ မှနျမှနျကနျကနျဆောငျရှကျတတျလို့ တရားလို့ ချေါဆိုတာဖွဈပါတယျ။ တရားတျောကို သုံးပိုငျးခှဲလိုကျပွီး ပိဋကတျသုံးပုံလို့ ချေါပါတယျ။ ပိဋကဆိုတာ တောငျး၊ ခွငျးတောငျးလို့ အဓိပ်ပာယျရပါတယျ။ တရားတျောတှကေို တူရာတူရာပေါငျးစုပွီး တောငျးထဲကို ထညျ့လိုကျရငျ သုတ်တနျတရားတျောက တဈတောငျး၊ ဝိနညျးတရားတျောက တဈတောငျးနဲ့ အဘိဓမ်မာတရားတျောက တဈတောငျးဖွဈလာပါတယျ။ သုတ်တနျတရားတျောဆိုတာ အခြိနျကာလ၊ နရောဒသေနဲ့ အခွအေနကေို နှိုငျးဆပွီး ဟောကွားခဲ့တဲ့ တရားတျောဖွဈပါတယျ။ ဝိနညျးတရားတျောဆိုတာက ရဟနျးတျောတှအေတှကျ ဘုရားရှငျ ပညတျထားတဲ့ တရားတျောတှပေဲဖွဈပါတယျ။ အဘိဓမ်မာတရားတျောဆိုတာ သုတျ၊ ဝိနညျးတှထေကျ မွငျ့ပွီး အခြိနျကာလနဲ့ နရောဒသေကို မကွညျ့တဲ့ တရားတျောဖွဈပါတယျ။
၃။ သံဃာဆိုတာ ဘာလဲ။
အပယျလေးပါးကို ကရြောကျစတေတျတဲ့ ကိလသောတရားတှကေို ပယျသတျနိုငျပွီး ဘုရားအဆုံးအမတှကေို လိုကျနာကာ အကငျြ့သီလတူညီကွတဲ့သူတှကေို သံဃာလို့ ချေါပါတယျ။ သံဃာကို အရိယာသံဃာ (ကိလသောအညဈအကွေးတှေ ပယျသတျပွီးသောသူ) နဲ့ သမ်မုတိသံဃာ (နိဗ်ဗာနျမဂျဖိုလျရအောငျ ကွိုးစားနတေဲ့သူ) ဆိုပွီး ခှဲခွားထားပါတယျ။ ရဟနျးဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကတော့ “အရဟန်တ (ကိလသောမရှိတဲ့သူ)” ကနေ ဆငျးသကျလာတာပါ။ ရှစေ့ကားလုံး “အ” နဲ့ နောကျစကားလုံး “တ” ပွုတျပွီး အခြိနျကာလကွာလာတာနဲ့ “ရဟနျး” ဆိုပွီး ဖွဈလာတာပါ။ ရဟနျးအဖွဈကို ခံယူတဲ့အခါ အင်ျဂါငါးပါး ပွညျ့စုံရပါတယျ။
(၁) ဝတ်ထု (ရဟနျးလောငျးရှိခွငျး)
(၂) ပရိသတျ (အနညျးဆုံး ရဟနျးငါးပါးရှိခွငျး)
(၃) ဥတျ (ကမ်မဝါစာ အခြီးစကား)
(၄) ကမ်မဝါ (ကံဆောငျစာ) နဲ့
(၅) သိမျ (ရဟနျးခံရာအရပျ)
အဲဒီအင်ျဂါငါးပါးကိုတော့ ပါဠိလို “ပဉ်စင်ျဂ” လို့ ချေါပါတယျ။ “ပဉ်စင်ျဂ” ကို မွနျမာမှုပွုလိုကျတဲ့အခါ “ပဉ်စငျး” ဆိုပွီး ဖွဈလာပါတယျ။ လေးစားသမှုနဲ့ “ဦး” တပျလိုကျတဲ့အခါ “ဦးပဉ်စငျး” ဖွဈလာပါတော့တယျ။ သတ်တဝါတှအေတှကျ ရခဲခွငျးတရားငါးပါး (ဒုလ်လဘတရားငါးပါး) ရှိပါတယျ။
(၁) ဘုရားအဖွဈကို ရခဲခွငျး
(၂) လူ့အဖွဈကို ရခဲခွငျး
(၃) သဒ်ဓါတရားပွညျ့စုံတဲ့အဖွဈကို ရခဲခွငျး
(၄) ရဟနျးအဖွဈကို ရခဲခွငျး
(၅) သူတျောကောငျးတရား နာရခဲခွငျး
လေးအသင်ျခနြေဲ့ကမ်ဘာတဈသနျး ပါရမီဖွညျ့ကငျြ့ခဲ့ရတဲ့ ဘုရားရှငျကိုယျတျောတိုငျ မွငျ့မွတျတဲ့ ရဟနျးအဖွဈကို ကိုးကွိမျပဲရဖူးတဲ့အတှကျ ရဟနျးဘဝကို ရောကျကွတဲ့သူတှဟော ဘုနျးကံကွီးမားတဲ့အတှကျ ရဟနျးတျောတှကေို “ဘုနျးကွီး” လို့ချေါဆိုတာဖွဈပါတယျ။ ရှငျဘုရငျရဲ့ သား၊ သမီးတှကေို “သားတျော” “သမီးတျော” ဆိုပွီး သုံးနှုနျးကွသလို ရှငျဘုရငျ ကိုးကှယျတဲ့ ရဟနျးတျောတှကေိုလညျး “မငျးဆရာတျော” ဆိုပွီး ချေါဝျေါကွပါတယျ။ ဘုရငျခတျေမရှိတော့တဲ့အခါ “မငျး” ပွုတျပွီး “ဆရာတျော” ဝေါဟာရကနျြရဈနတောဖွဈပါတယျ။ အားလုံးကို ခွုံငုံသုံးသပျရရငျတော့ သကျတျော၊ ဝါတျောနုနယျပွီး ကိုယျပိုငျကြောငျးမရှိသေးတဲ့ သာသနာ့ဝနျထမျးတှကေို “ဦးပဉ်စငျး” “ရဟနျး” လို့ သုံးနှုနျးကွပွီး ဝါတျောကွီးမွငျ့တဲ့ သာသနာ့ဝနျထမျးတှကေိုတော့ “ဆရာတျော” “ဘုနျးကွီး” လို့ သုံးနှုနျးကွပါတယျ။
ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတျောတှကေို “ရတနာမွတျသုံးပါး” လို့ ချေါဆိုပါတယျ။ ရတနာဆိုတာ “နှဈသကျကွညျနူးမှုကို ဖွဈစတေဲ့အရာ” လို့ အဓိပ်ပာယျရတဲ့ ပါဠိစကားဖွဈပါတယျ။ စိနျရှေ၊ ပတ်တမွားကိုလညျး ရတနာ၊ သားသမီးတှကေိုလညျး သားရတနာ သမီးရတနာဆိုပွီး ချေါဆိုကွပါတယျ။ ရတနာအားလုံးထဲမှာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာသုံးပါးဟာ အမွတျဆုံး၊ အကောငျးဆုံးဖွဈတဲ့အတှကျ တခွားရတနာတှနေဲ့ မတူအောငျ “ရတနာမွတျသုံးပါး” လို့ချေါဆိုတာဖွဈပါတယျ။
၄။ ရှိခိုးခွငျးနှငျ့ ကနျတော့ခွငျး။
အိပျရာဝငျခါနီးမှာ ဘုရားရှိခိုးမယျ၊ ဘုရားကနျတော့မယျဆိုပွီး ပွောကွတယျ။ ရှိခိုးမယျနဲ့ ကနျတော့မယျဆိုပွီး ဝေါဟာရတှေ ပွောငျးလဲသုံးနှုနျးကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဆရာကနျတော့ပှဲလို့သာရှိပွီး ဆရာရှိခိုးပှဲဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ကဲ . . ဒါဆို ရှိခိုးခွငျးနဲ့ ကနျတော့ခွငျး ဘာကှာသလဲဆိုတာကွညျ့ရအောငျ။
ကနျတော့ရတဲ့အကွောငျးက ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာစတဲ့ ရတနာမွတျသုံးပါးနဲ့ တခွားပုဂ်ဂိုလျတဈယောကျအပျေါမှာ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံ တဈပါးပါးနဲ့ ကြူးလှနျမှုရှိတယျ။ ကြူးလှနျခဲ့တဲ့အပွဈတှကေို ပွပြေောကျခငျြတဲ့အတှကျ ကနျတော့တာဖွဈပါတယျ။ အပွဈရှိထားလို့ ကနျတော့တာဖွဈပါတယျ။ ကနျတော့လိုကျရတဲ့အတှကျ ကိုယျ့မှာရှိတဲ့ အပွဈတှေ ပွပြေောကျသှားပါတယျ။ (မှတျခကျြ။ ။ ပဉ်စာနန်တိယကံငါးပါး မပါ)
ရှိခိုးရတဲ့အကွောငျးက ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာစတဲ့ ရတနာမွတျသုံးပါးနဲ့ တခွားပုဂ်ဂိုလျတဈယောကျအပျေါမှာ အပွဈကြူးလှနျထားခွငျး မရှိပါဘူး။ ရတနာမွတျသုံးပါးနဲ့ မိဘဆရာတှရေဲ့ ဂုဏျကြေးဇူးကို ကွညျညိုလေးစားတဲ့အတှကျကွောငျ့ ရှိခိုးတာဖွဈပါတယျ။ ရှိခိုးလိုကျရတဲ့အတှကျ အသကျရှညျခွငျး၊ အဆငျးလှခွငျး၊ ဘုနျတနျခိုးကွီးခွငျး၊ ဉာဏျပညာကွီးခွငျး စတဲ့အကြိုးကြေးဇူးတှေ ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။ ရှိခိုးတာ ကုသိုလျရတဲ့သဘောဖွဈပါတယျ။
ကဲ . . . ဒါတှကေတော့ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတှေ အခွခေံသိထိုကျတဲ့ ဗဟုသုတတှဖွေဈပါတယျ။ နောကျမြားမှာလညျး ဗဟုသုတဖွဈဖှယျအကွောငျးအရာတှကေို ရှာဖှတေငျဆကျပေးဦးမှာဖွဈပါတယျ။ သူငယျခငျြးတှေ သိရအောငျလညျး ဝငှေပေးပါဦးလို့ တိုကျတှနျးလိုပါတယျခငျဗြာ။
ကိုးကား ။ ။ မိရိုးဖလာလှနျ ဗုဒ်ဓဘာသာ၊ သုခမှတျစု၊ ဇိနတ်ထပကာသနီကမျြး။